I-China Carbide Rotary Burr SL Shape -Tape Shape kunye nabenzi beRadius kunye nabathengisi | Xinhua
Ikhabhayithi yokuKhanya ngokuKhanya kweCarbide -Imilo yeTape eneRadius
Ubume beCarbide Rotary Burr-Taper Shap-Radius SL, i-Carbide burr isetyenziswa kakhulu ekusebenzeni ngentsimbi, ubunjineli, imodeli yobunjineli, ukrola kweenkuni, ukwenza ubucwebe, iwelding, ukubuyisela umva, ukuphosa, ukuphazamisa, ukusila, ukubola kwentloko yesilinda kunye nokukrola. Kwaye kwasetyenziswa kwi-aerospace, izithuthi, amazinyo, ilitye kunye nokukrola isinyithi
● Umsebenzi ulula, ukhuselekile kwaye ulungele.
● Inokuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi kunye nokunciphisa amandla abasebenzi.
● Inokonga amatyeli alishumi endleko zemveliso kwaye inyuse izibonelelo zoqoqosho.
● Ukuhlala ixesha elide, ubomi obude benkonzo, isantya sokusebenza ngokukhawuleza.
● Kwiimeko ezininzi, inokutshintsha indawo yevili yokugaya encinci, ngaphandle kongcoliseko lothuli.
1: Ukusika imiphetho yokudanyaza, ukugquma kunye nemigca ye-welding, i-forging kunye ne-welding parts;
2: Gqiba machining iintlobo ezahlukeneyo ngumngundo zentsimbi;
3: Gqiba ukusika imbaleki yevili;
4: Ukuxhamla, ukujikeleza kunye nokuhambisa iintlobo ezahlukeneyo zamalungu oomatshini;
5: Gqibezela machining umphezulu wazala ngaphakathi iindawo noomatshini;
6: nokukrola kwezobugcisa kuzo zonke iintlobo zesinyithi okanye iinxalenye ezingezizo zesinyithi;
Iindidi zokusika iiMiphetho
Iindidi zokusika Imifanekiso Ukusetyenziswa
Ukusika okukodwa uM Intloko yokusika enye esemgangathweni, imilo enamacangci ilungile, kwaye umphezulu wokugqiba ulungile, kufanelekile ukuba kusetyenzwe ngesinyithi esomeleleyo ngobulukhuni i-HRC40-60 degrees, i-alloy enganyangekiyo ngobushushu, ingxubevange yesiseko se-nikel, ingxubevange esekwe kuCobalt, intsimbi engenasici, njl.
Sika kabini X Le milo yokusika kabini ine-chip emfutshane kunye nokugqitywa komphezulu ophezulu, kufanelekile ukuba kusetyenzwe nge-iron cast, i-cast cast, i-iron ngobunzima obungaphantsi kwe-HRC60, i-Nikel based alloy, cobalt based alloy, austenitic stainless steel, titanium alloy, njl.
IAluminiyam Sika uW Ubume bokusika iAluminiyam bunepokotho enkulu ye-chip, isiko elibukhali kakhulu kunye nokususwa okukhawulezayo kwe-chip, kufanelekile ukuba kusetyenzwe nge-aluminium, ingxubevange yealuminium, isinyithi esikhanyayo, isinyithi esingenantsimbi, iplastiki, irabha enzima, ukhuni njalo njalo
Uhlobo kunye nohlobo Umyalelo No. Ubungakanani Uhlobo Lwamazinyo
Intloko yeDia (mm) d1 Ubude beNtloko (mm) L2 I-Shank Dia (mm) d2 Ubude bebonke (mm) L1
Imilo yeTaper kunye nohlobo lweRadiyo L L0313X03-25 3 13 3 38 X
L0413X03-38 4 13 3 51 X
L0613X03-38 6 13 3 51 X
L0616X06-45 6 16 6 61 X
L0822X06-45 8 22 6 67 X
I-L1025X06-45 10 25 6 70 X
I-L1228X06-45 12 28 6 73 X
I-L1428X06-45 14 28 6 73 X
I-L1633X06-45 16 33 6 78 X
A: Ewe, ukulandelelana komkhondo kuyafumaneka emva konxibelelwano olusebenzayo.
Umbuzo: Ngaba unakho ukubonelela ngezinye izixhobo zomatshini wamanzi?
Ewe sinabaxhasi boomatshini bamanzi abathe basebenzisana iminyaka emininzi, sinokukunika ezinye izinto ezikumgangatho ophezulu, ngexabiso eliphantsi.
A: Ewe, sineenkonzo zokulandela umkhondo eziqinisekiswe ngumgangatho kwiimveliso ezithengisiweyo. Ukuba unemibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nabasebenzi bethu bokuthengisa. Uya kufumana inkonzo eyonelisayo emva kwentengiso ngaphakathi kweeyure ezingama-24.
Egqithileyo Ikhabhayithi yeKhabhayithi yeRotary Burr SK Shape -Icone Shape ene-90 °
Okulandelayo: Carbide bokushicilela Burr SM Imilo -Cone Imilo
Inkqubela phambili yeCarbide Rotary Burr
Eyona ndawo ibhetele yeCarbide Rotary Burr
Umgangatho oGqwesileyo weCarbide Rotary Burr
IKhabhayithi engenanto yeCarbide Rotary Burr
Ikhabhayithi yokuKhanya ngokuKhanya kweCarbide
Carbide bokushicilela Burr umsiki
Umqhubi weCarbide Rotary Burr
Carbide bokushicilela Burr Cwangcisa
Isamente yeCarbide yeRotary Burr
Iibhari eziBhatyiweyo zeCarbide Rotary Burrs
I-Carbide yaseRotary yeRotary Burr
Umvelisi weCarbide Rotary Burr
Sika kabini khabhayithi Rotary Burr Cwangcisa
Umgangatho ophezulu weCarbide Rotary Burr
Iibhalbhu eziguqukayo zeCarbide Rotary Burrs
Pfeld khabhayithi bokushicilela Burr
Mfutshane Carbide Iintonga For bokushicilela Burrs
I-Totem Tungsten Carbide Rotary Burrs
Tungsten khabhayithi rotary Burr
I-Tungsten Carbide Rotary Burr engenanto
I-Tungsten Carbide Rotary Burr Setha
I-Tungsten Carbide Rotary Burrs
Carbide bokushicilela Burr SF Imilo -Tree Imilo R ...
Carbide bokushicilela Burr SG Imilo -Tree Imilo P ...
Carbide bokushicilela Burr SB Imilo -Cylinder Imilo wi ...
Carbide bokushicilela Burr SM Imilo -Cone Imilo
Carbide bokushicilela Burr SA Imilo -Cylinder Imilo
Ikhabhayithi yeKhabhayithi yeRotary Burr SK Shape -Icone Shape ene-90 °